Banyere JBH - AnHui Jin Bai He Medical Apparatus Co., Ltd.
AnHui Jin Bai He Medical ngwa ngwa Co., Ltd. hiwere na 2013.
A n'ichepụta isi ụlọ ọrụ na mwekota nke R & D, mmepụta na mba ahịa ìgwè nwere onwe haziri ngwaahịa na ODM ngwaahịa maka ndị ahịa.
Isi ngwaahịa gụnyere ịwa ahụ masks, ndidi lifts, ụlọ ọgwụ bed. Ngwaahịa niile enwetala asambodo nke FDA, CE, na ahịa CFDA karịrị mba 40 n'ụwa, na-ekpuchi ndịda na North America, Australia, ndịda ọwụwa anyanwụ Asia, n'etiti ọwụwa anyanwụ, HK, Macao, Taiwan, na mba ndị ọzọ.
▍ orylọ ọrụ mmepụta ihe ▍ Ihe nkpuchi nkpuchi ▍ Imekọ ihe ọnụ Akụkọ & Ihe Omume
▍ orylọ ọrụ mmepụta ihe
Na 2018, JBH oche nkwagharị na-ewere R.POON MEDICAL PRODUCTS CO. LTD. (Uniforce®️), gbakwunyere n'ụzọ dị oke mkpa, dịka Ngwaọrụ Ndidi, Eje Ije ije, Ndina Ndina na athlọ mposi Nchekwa ngwaahịa, wdg. R.POON MEDICAL bụ ụlọ ọrụ ama ama nke tọrọ ntọala na 1983, Taiwan, kwagara Foshan, China ma ugbu a na mpaghara Anhui na mpaghara nke 140,000 square mita na narị otu narị ndị ọrụ ọkachamara nwere mmụọ mmụọ nke mwekota, afọ ojuju, nghazi na ndị ahịa, na-aga n'ihu na-emepe ngwaahịa ọhụrụ iji nyere ndị okenye na ndị ọrụ aka aka ibi ndụ dị mfe, dị mfe ma ka mma.
▍ Lọ ọrụ Na Nanjing City
Emi odude ke Nanjing City, Jiangsu Province (JBH oche nkwagharị) 12, 800 square Production Plant.
▍ Factory Na Mingguang City
Emi odude na Mingguang City, Anhui Province (Uniforce®️) 140, 000 sq. Production Plant.
Nkpuchi Production Line
Ihe Mere Anyị Ji Emepụta Masks
Dị ka onye na-arụ ọrụ ngwaọrụ ahụike, JBH nwere ndị ọrụ ya na-agbanwe agbanwe na ọtụtụ ihe R&D iji setịpụ usoro ntinye ihe eji arụ ọrụ, yana ọ mere ya.
Ewubere ụlọ ọrụ mkpuchi ịwa ahụ na ụlọ ọrụ JBH Anhui, obodo Mingguang. Ma ugbu a, anyị nwere ike ịnye ihe karịrị 3,000,000 iberibe masks ahụike masịrị ugbu a. Gaghị egbusi ịtụ ya. N'agbanyeghị mgbe ọ bụ nnọọ welcome ileta anyị factory nakwa.
▍ Otu R & D
Afọ 20 nke ụlọ ọrụ ahụmahụ injinia.
Emepe emepe ọhụrụ ngwaahịa na ahaziri ihe.
Nzaghachi ahịa ngwa ngwa.
▍ Otu ahia
24/7 na-eguzo site na ọrụ ndị ahịa.
N'oge na-adịghị anabata oge.
Elu magburu onwe mgbe-ire ọrụ.
▍ Ndị otu na-arụ ọrụ
Ndị ọkachamara n'ịrụ ọrụ, nye iwu karịa nyiwe ntanetị 5 iji kwalite ọrịre na okwu nduhie.
onye na-eku ume ọkụ eletrik, ọgwụ na-edozi akwa, ndozi bed maka ndị ọrịa, ihe nkpuchi nwere ike wepu, ihe nkpuchi ihu, hydraulic ndidi lifter,
onye na-eku ume ọkụ eletrik, ọgwụ na-edozi akwa, hydraulic ndidi lifter, ndozi bed maka ndị ọrịa, ihe nkpuchi nwere ike wepu, ihe nkpuchi ihu,